"William James Sidis (or) The Smartest Guy Ever?" - MYANMORE+
Home Weird “William James Sidis (or) The Smartest Guy Ever?”
စာဖတျသူရဲ့IQ ရမှတျက ဘယျလောကျရှိနလေဲဆိုတာ စဈကွညျ့ဖူးလား? မြားသောအားဖွငျ့ လူမြားစုရဲ့ IQ ရမှတျက ၁၀၀ ဝနျးကငျြရှိတတျပွီး ၁၄၀ နဲ့အထကျရှိတဲ့သူကို Genius လို့သတျမှတျကွပါတယျ။ George Washington (IQ 140), Mozart (IQ 153) Charles Darwin (IQ 153), Benjamin Franklin (IQ 160) Albert Einstein (IQ 160), Leonardo da Vinci (IQ 180) နဲ့ Sir Isaac Newton (IQ 190 ဟုယူဆရ) တို့ကတော့ သမိုငျးတဈလြှောကျမှာ IQ အကောငျးဆုံးလူသားတှပေါ။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ထကျ ပိုကောငျးတယျလို့ သတျမှတျခံထားရသူတဈယောကျရှိနပေါတယျ။ သူကတော့ သင်ျခြာနဲ့ ဘာသာဗဒေမှာ ထူးခွားတဲ့ ပါရမီနဲ့ စှမျးရညျတှရှေိသူပါ။
အရှယျနဲ့မလိုကျတဲ့စှမျးရညျပိုငျရှငျ က အသကျ ၈ လမှတငျာ အစားအစာတှကေို ကိုယျတိုငျ ဇှနျးနဲ့ခပျစားတတျပွီး ပုခကျမှာဆှဲထားတဲ့ သဈသားတုံးလေးတှပေျေါက အက်ခရာတှကေိုလညျး စဖတျတတျခဲ့ပါတယျ။ အသကျ ၁ နှဈအရှယျရောကျခြိနျမှာတော့ စာလုံးတှကေို စပွီးပေါငျးဖတျတတျလာခဲ့ပါတယျ။
အသကျ ၆ နှဈမှာ Russian, French, German, Hebrew, Turkish နဲ့ Armenian ဘာသာစကားတှကေို လလေ့ာသငျယူတတျမွောကျခဲ့တဲ့အပွငျ တဈရကျအတှငျးအလုံးစုံနားလညျတတျမွောကျအောငျသငျယူနိုငျတဲ့ Vendergood ဆိုတဲ့ ဘာသာစကားတဈမြိုးကိုပါ သူကတီထှငျခဲ့ပါသေးတယျ။ သူတတျမွောကျထားတဲ့ ဘာသာစကားတဈမြိုးကနတေဈမြိုးကိုလညျး ခကျြခငျြးဘာသာပွနျနိုငျစှမျးရှိတယျလို့ဆိုကွပါတယျ။ Harvard Medical School Anatomy Exam ကို အသကျ ၇ နှဈမှာဖွဆေိုအောငျမွငျပွီး အသကျ ၈ နှဈပွညျ့ပွီးခြိနျမှာ MIT Entrance Exam ကို ဖွဆေိုအောငျမွငျခဲ့သူပါ။
ကိုးကှယျရာဘာသာတရားအားလုံးကိုလလေ့ာပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ Sidis က ဘာသာမဲ့တဈယောကျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ Sidis ရဲ့အံ့ခြီးလောကျတဲ့စှမျးရညျတဈမြိုးက သူဖတျမှတျခဲ့သမြှအကွောငျးအရာတိုငျးကို အတိအကမြတျမိနနေိုငျတဲ့စှမျးရညျ (photographic memory) ရှိတာပါ။
Harvard Mathematical Club မှာ Four-Dimensional Bodies အကွောငျးပို့ခခြိနျမှာဆိုရငျ Sidis ရဲ့အသကျက ၁၁ နှဈသာသာပဲရှိပါသေးတယျ။ ဒါကို MITက Professor Daniel Comstock တှပွေီ့းတဲ့အခါ Sidis ဟာ ရာစုနှဈရဲ့ အကွီးကယျြဆုံးသင်ျခြာပညာရှငျဖွဈလာလိမျ့မယျ လို့တောငျခနျ့မှနျးပွောဆိုခဲ့ဖူးပါတယျ။ Sidis အသကျ ၄ နှဈကနေ ၈ နှဈကွားအရှယျမှာ Anatomy ဆိုငျရာစာအုပျ ၂ အုပျနဲ့ Astronomy ဆိုငျရာစာအုပျ ၂ အုပျရေးသားခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာလညျး စာအုပျအမွောကျအမွားကို ကလောငျခှဲမြားစှာနဲ့ရေးသားထုတျဝခေဲ့ပါတယျ။
၁၉၂၁ ခုနှဈ၊ အရှကေ့မျးရိုးတနျးဒသေကိုပွနျပွောငျးရှလေ့ာပွီးနောကျကာလတှမှောတော့ Sidis က မထငျမရှားဘဝနဲ့ပဲနထေိုငျခဲ့ပွီး July 17, 1944 မှာ ဦးနှောကျသှေးကွောပေါကျဝဒေနာနဲ့ကှယျလှနျသှားခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ IQ Test Result နဲ့ပတျသကျလို့ မှတျတမျးမှတျရာအထငျအရှားမရှိခဲ့ပမေဲ့လညျး MIT Physics professor Daniel Frost Comstock နဲ့ American mathematician Norbert Wiener တို့လိုပုဂိုလျတှရေဲ့ ပွောဆိုရေးသားမှုတှအေရ Sidis ကို လူသားသမိုငျးတဈလြှောကျ IQ အမွငျ့ဆုံးလူသားအဖွဈ သိရှိသတျမှတျထားကွဆဲပါ။
(ကိုယျ့ရဲ့ IQ,ရမှတျကိုသိလိုရငျတော့ https://iq-test.net/free-iq-test.html ကို သှားရောကျစဈကွညျ့နိုငျပါတယျ)
စာဖတ်သူရဲ့IQ ရမှတ်က ဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာ စစ်ကြည့်ဖူးလား? များသောအားဖြင့် လူများစုရဲ့ IQ ရမှတ်က ၁၀၀ ဝန်းကျင်ရှိတတ်ပြီး ၁၄၀ နဲ့အထက်ရှိတဲ့သူကို Genius လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ George Washington (IQ 140), Mozart (IQ 153) Charles Darwin (IQ 153), Benjamin Franklin (IQ 160) Albert Einstein (IQ 160), Leonardo da Vinci (IQ 180) နဲ့ Sir Isaac Newton (IQ 190 ဟုယူဆရ) တို့ကတော့ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ IQ အကောင်းဆုံးလူသားတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရသူတစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်။ သူကတော့ သင်္ချာနဲ့ ဘာသာဗေဒမှာ ထူးခြားတဲ့ ပါရမီနဲ့ စွမ်းရည်တွေရှိသူ ပါ။
အရွယ်နဲ့မလိုက်တဲ့စွမ်းရည်ပိုင်ရှင် က အသက် ၈ လမှာတင် အစားအစာတွေကို ကိုယ်တိုင် ဇွန်းနဲ့ခပ်စားတတ်ပြီး ပုခက်မှာဆွဲထားတဲ့ သစ်သားတုံးလေးတွေပေါ်က အက္ခရာတွေကိုလည်း စဖတ်တတ်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၁ နှစ်အရွယ်ရောက်ချိန်မှာတော့ စာလုံးတွေကို စပြီးပေါင်းဖတ်တတ်လာခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၆ နှစ်မှာ Russian, French, German, Hebrew, Turkish နဲ့ Armenian ဘာသာစကားတွေကို လေ့လာသင်ယူတတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အပြင် တစ်ရက်အတွင်းအလုံးစုံနားလည်တတ်မြောက်အောင်သင်ယူနိုင်တဲ့ Vendergood ဆိုတဲ့ ဘာသာစကားတစ်မျိုးကိုပါ သူကတီထွင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သူတတ်မြောက်ထားတဲ့ ဘာသာစကားတစ်မျိုးကနေတစ်မျိုးကိုလည်း ချက်ချင်းဘာသာပြန်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ Harvard Medical School Anatomy Exam ကို အသက် ၇ နှစ်မှာဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီး အသက် ၈ နှစ်ပြည့်ပြီးချိန်မှာ MIT Entrance Exam ကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သူပါ။
ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားအားလုံးကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Sidis က ဘာသာမဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Sidis ရဲ့အံ့ချီးလောက်တဲ့စွမ်းရည်တစ်မျိုးက သူဖတ်မှတ်ခဲ့သမျှအကြောင်းအရာတိုင်းကို အတိအကျမတ်မိနေနိုင်တဲ့စွမ်းရည် (photographic memory) ရှိတာပါ။
Harvard Mathematical Club မှာ Four-Dimensional Bodies အကြောင်းပို့ချချိန်မှာဆိုရင် Sidis ရဲ့အသက်က ၁၁ နှစ်သာသာပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒါကို MITက Professor Daniel Comstock တွေ့ပြီးတဲ့အခါ Sidis ဟာ ရာစုနှစ်ရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံးသင်္ချာပညာရှင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် လို့တောင်ခန့်မှန်းပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ Sidis အသက် ၄ နှစ်ကနေ ၈ နှစ်ကြားအရွယ်မှာ Anatomy ဆိုင်ရာစာအုပ် ၂ အုပ်နဲ့ Astronomy ဆိုင်ရာစာအုပ် ၂ အုပ်ရေးသားခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာလည်း စာအုပ်အမြောက်အမြားကို ကလောင်ခွဲများစွာနဲ့ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
၁၉၂၁ ခုနှစ်၊ အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသကိုပြန်ပြောင်းရွှေ့လာပြီးနောက်ကာလတွေမှာတော့ Sidis က မထင်မရှားဘဝနဲ့ပဲနေထိုင်ခဲ့ပြီး July 17, 1944 မှာ ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက်ဝေဒနာနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ IQ Test Result နဲ့ပတ်သက်လို့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာအထင်အရှားမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်း MIT Physics professor Daniel Frost Comstock နဲ့ American mathematician Norbert Wiener တို့လိုပုဂိုလ်တွေရဲ့ ပြောဆိုရေးသားမှုတွေအရ Sidis ကို လူသားသမိုင်းတစ်လျှောက် IQ အမြင့်ဆုံးလူသားအဖြစ် သိရှိသတ်မှတ်ထားကြဆဲပါ။
(ကိုယ့်ရဲ့ IQ,ရမှတ်ကိုသိလိုရင်တော့ https://iq-test.net/free-iq-test.html ကို သွားရောက်စစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်)
Next articleNetflix မှာကွညျ့ရမယျ့ anime မြား